Ejipta : Ravan’ny afo ny foiben’ny ‘’Antokon’ny Rahampitso’’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 5:23 GMT
Nanambara ny vaovao ilay bilaogera Zeinobia :
Avy amin’i Noura Younis, « taorian'ny fivoriana faratampony, simban’ny afo tanteraka ny foiben'ny antoko Al Ghad ao Al Tabrir!!?”
Ny antoko liberaly Al Ghad dia antokon’ny mpanohitra tarihin’i Dokotera Ayman Nour izay any am-ponja ankehitriny ary voampanga tamin’ny raharaha izay tsy naharesy lahatra ny olona.
Nisy ny fifandonana teo amin’ireo mpitondra ny antoko momba izay olona hitarika izany.
Fanavaozam-baovao 1 : Araka ny tranonkalan’ny Asa Fanaovan-gazetin’olon-tsotra Abn Masr (amin’ny teny Arabo ; sary), ny ady nisy teo amin’ireo mpanohana an’ i Ayman Nour sy ny an’ i Moussa, mpifanandrina amin’i Nour izay te hitarika ilay antoko, no nahatonga ny afo. Etsy andanin’izany, miandany amin’ny fitondrana i Moussa.
Nanoratra ny Egyptian Citizen hoe :
Ankehitriny, nanafika ny antoko Elghad ny Mpitandro ny Filaminana Egyptiana sy ireo jiolahimboto maro, nandrehitra ny afo ary nandroba ny foibe [ ny antoko].
Nilaza ireo nanatri-maso fa anisan’ireo mpanohana an’i Moussa Mustafa Moussa ireo mpandroba sy nandoro ny antoko, izay nisintaka tao amin'ny antoko El Ghad tantanan’i Dokotera Ayman Nour.
Noho ny fifandraisana nampiahiahy nisy teo amin’ i Moussa Mustafa Moussa sy ireo Mpitandro ny Filaminana Egyptiana, niezaka nanampy azy hifehy ny antoko El Ghad ( Ayman Nour) ity farany.
Izao faharavana tanteraka izao no vokatr’izany.
Niresaka momba ny fitantaran’ny vavolombelona iray ilay bilaogera Nidaal :
Ny mahagaga dia ity, matetika feno polisy ny kianjan’ny Talaat Harb ; androany anefa toa tahaka ny hoe tsy miasa izy ireo. Tsy ao anatin’ny asan’izy ireo ny nanakana ireo jiolahimboto rehefa nanafika ny antoko izy ireo. Ary araka ny filazan’ireo nanatri-maso, notapahin’ireo jiolahimboto ny fantson’ireo mpamonjy voina, ary notafihany raha nanohitra izy ireo. Nitranga izany rehetra izany, raha faly nitazana fotsiny ireo mpitandro ny filaminana.
Nitanisa izay nolazain’ny namana iray taminy ihany koa ny Skeptic momba ny antony nahatonga ny afo.
Nisy namana iray teo an-toerana nitantara fa nanomboka ny ady rehefa tsy nety niala ny foibe ny vadin’i Ayman Nour, i Gamila IsmaÏl, ary nanozona hoe : “Miala Mubarak” Voalaza fa namaly ireo mpanohana ny governemanta tohanan’ny elatra havanana hoe : “Midina aty, ry ilay vehivavy adala ity !”